Amathrendi okusha ku ukwakheka ucingo ngoba ubuhle ukuba njengoba zemvelo. Hlanza, lesikhumba emihle, elithambile othi awube umthunzi ufasimbe amehlo kancane - Yilokhu engcono ukuhlobisa intombazane. Ngokwemvelo, ngokuqondene nokuthambekela okunjalo isigaba esisha ukuthuthukiswa iphutha kulo lonke umkhakha ukwakheka nokunakekela. Esikhundleni esikhunjeni kakhulu ukuthungwa uyisidala sicindezelwe imikhiqizo yezimonyo kanye isipanji kungase kube nzima ukusamukela lwazo kwamila ukuthungwa ukukhanya emabhulashini ezithambile isicelo sabo.
Ngempela, isimo emabhulashini - Umkhuba omusha futhi kwesithixo entsha zonke ozinikezele futhi ubuhle. Decent izinga ibhulashi - hhayi kuphela ithuluzi eliwusizo sokusebenzisa izimonyo, kodwa futhi uhlobo ithoyizi, ukuziqhenya iqoqo, sicela uyeke umphefumulo isifazane. I ezihlukahlukene bobunjwa, amafomu nosayizi emabhulashini iziteleka.
ibhulashi Yemvelo noma zokwenziwa
Hlukanisa emabhulashini yemvelo kanye zokwenziwa. ibhulashi wemvelo bavame yoboya izingwejeje, izimbuzi, onogwaja noma norochek. Brands bathi izilwane ababuzwa ngesikhathi esifanayo. eziyigugu zabo phansi nje enozwela ukugunda. ibhulashi Yemvelo uthambile kakhulu, inzuzo enhle futhi ludluliselwa isikhumba izimonyo, ngobumnene ake umthunzi wakhe. Noma kunjalo ibhulashi sendwangu yemvelo - nemnandi eqolo. Azinikeze zimbalwa. Ngaphandle emabhulashini zemvelo zidinga ukunakekelwa ethize, badinga kahle bahlanza futhi omile esasile.
Ngakho-ke, abaningi ubuchwepheshe yezimonyo corporations ngenkuthalo wahlanganyela kokusungulwa zokwenziwa Inqwaba ngoba emabhulashini ukuthi ngeke sikuvumele Ukuthamba yemvelo, kodwa kuyoba yini ngakho ezibizayo futhi finicky ukuhlanza.
Taklonovye Makeup emabhulashini
Taklonovye ibhulashi waba impumelelo kwi-industry yezobuhle. Taklon - zokwenziwa ezibonakalayo, kodwa, nahlulele by ukubuyekezwa, ngezindlela eziningi bebakhulu yemvelo:
Okokuqala, taklonovye ukuxubha hypoallergenic ngokuphelele, ngokungafani emabhulashini wenziwe ngendwangu engokwemvelo. Ziyakwazi esisemqoka amantombazane abanale isikhumba silume noma obomvu ibhulashi noboya.
Okwesibili, taklon - i material yokufakelwa, futhi ubuye efanelekayo ukuthungwa alube, hhayi nje ezomile. Akukona ukuncela imikhiqizo fat and gel kuka ngokuvamile uhlushwa Imicu yotshani zemvelo.
Okwesithathu, lezi emabhulashini kukhona kulula ukuhlanza, futhi cishe ukuze ome, zokwenziwa impahla kulula abilayo, futhi okuhlala isikhathi eside.
Futhi taklonovye ibhulashi uvumele ukonga ngaphezulu ukusetshenziswa izimonyo sithole inani elincane umkhiqizo bese enamathela layering esidingekile. Lokhu kuyasiza ikakhulukazi uma usebenzisa izimonyo ezibizayo.
Brand nefilosofi Ecotools
niche Special emakethe elalihlala emabhulashini taklonovye ibhulashi "Ekotuls". Ecotools izimonyo brand okungewakho Paris Presents Incorporated Corporation. Brand, ethandwa kakhulu emakethe US. Le nkampani kungokwalabo uhlu izinkampani imvelo. nefilosofi ekoorientirovannosti manje ethandwa kakhulu. Kuhleli obala ukuthi imikhiqizo yenkampani, oveza hhayi kuphela eliphezulu izimpahla, kodwa futhi ukhathalela imvelo, kuthandwa kakhulu phakathi abathengi. I corporation ungumnikazi eziningana imiklomelo ehlonishwayo esigabeni "inkampani emphakathini ngamakhasimende."
Makeup emabhulashini Ecotools
Ukumba kungaba yisiphi isibalo "green" futhi enobungane ezweni elingaphandle, kodwa uma uveza imikhiqizo yekhwalithi ephansi, abathengi abanasithakazelo ukuthi zingabantu izikhathi eziyishumi ngosuku, londoloza iplanethi. Emabhulashini "Ekotuls" ethandwa phakathi ubuso kanye nabagqugquzeli abalandeli ajwayelekile ubuhle ngoba zinhle, eliphezulu futhi isikhathi eside. "Green" wabo - kungenye ibhonasi nice.
taklonovoe zokwenziwa fibre, aluminium kabusha isetshenziswa ukwenziwa emabhulashini. A isibambo benziwe ngoqalo zemvelo.
Futhi omunye. Girls kubalulekile ukuthi zonke izinto aphase okuku eliyelelweko bangene makeup yabo, wabheka enhle. Uma into, noma kungaba chapstick noma shayela uhlaka kokuthona, ubukeka ebukekayo, awusebenzi ukusindisa noma iyiphi inkulumo ngendlela engokwemvelo. Mhlawumbe inkampani Ecotools kancane leli qiniso elilula baye kahle. Ngenxa emiphemeni yabo ibukeke kahle zikanokusho kweqiniso (namantombazane Izibuyekezo uqinisekise lesi). Kuphethwe guys kabusha enze mathuluzi cute yezimonyo!
Zonke emabhulashini ayadingeka, zonke emabhulashini ibalulekile
Kuleli qophelo embhalweni emakethe ibhulashi "Ekotuls" ayatholakala emasayizi nabobunjwa labehlukene. Ziklanyelwe imisebenzi lahlukene lasetjentiswako isicelo enze-up.
Emabhulashini ngoba amathunzi. Wabo eziningi zezinto eziphilayo, kodwa eziyisisekelo - ibhulashi flat futhi Fluffy. I flat kufanelekile isicelo izithunzi futhi Fluffy - I-Ukufiphaza. ibhulashi Flat futhi kalula kungenzeka ukuletha amehlo. Kodwa ukuze 'zabatsat "imigexo nemicibisholo" Dior "isitayela, kungcono namanje ukuba ibhulashi mncane, ezambiwa.
Ibhulashi amashiya. Kulesi sigaba entendeni nokubamba brasmatik ibhulashi (njengase tube ne inki) nekama bese ubeka onqenqemeni flat bevelled ngoba ukugcwaliswa ishiya ubanikeze ukuma ofiselekayo.
Ukuxubha nohlaka iphimbo. Ngoba izisekelo zokwenziwa emabhulashini asebenza kangcono, izipanji ekhethekile noma iminwe siqu. Ukuze ulungise powder base ukhilimu, efanelekayo ezithambile ibhulashi Fluffy. Kungokufanayo, ukusetshenziswa ezincane kuphela othi awube.
Elikhulu ibhulashi-Keg ukuminyana isilinganiso muhle ukulungiswa, kanye fan Kulula ukusebenzisa highlighter.
Ibhulashi Izindebe - into ozikhethela ku ikhabethe ukwakheka, kodwa ngezinye izikhathi ewusizo kakhulu. Lipstick ibhulashi wenza ngokuphelele zokwenziwa inqwaba.
Nokho, abaningi makeup emabhulashini Ecotools kuthiwa izinto eziningi ngesikhathi esisodwa, futhi jikelele, ngeke behluleka ukujabulisa abathengi.
Kufika eyolanda ukwakheka ibhulashi ibhizinisi ingakwazi kube nzima kancane. Kulokhu esingazithatha amasethi ngomumo eyenziwe ukuthi zakha ochwepheshe okhathalelayo. Kukhona kits zihlanganisa ibhulashi kuphela izithunzi noma brow. Kodwa kungcono ukuthatha ikhithi jikelele elaliyoba iso, ababili noma abathathu ngoba ubuso.
Ikesi emabhulashini for ukwakheka kanye ingakhetfwa kahle. It liyadingeka ukuze lula isitoreji kanye zokuhamba emabhulashini. Kodwa uma uqhubeka nabo bonke okufanayo kungcono nje ingilazi ubude, zinqwabelana, ethwele ziwusizo ikakhulu endabeni lapho ningabi sikhubazekile futhi ezingcolile.
Inhlobo "Ekotuls" kukhona ibhulashi umgwaqo ekhethekile siqu ikhava cylinder yakhe - ekahle ukugqoka kwabo kuya beautician.
Ngingalutholaphi ukuthenga ibhulashi "Ekotuls"?
Emabhulashini wale nkampani, ngeshwa, zingekho abathengisi ethandwa kakhulu izimonyo zokuhlobisa. Ukuze ube umnikazi uyaziqhenya emabhulashini "Ekotuls" kufanele kube inkosi yezitolo online. Lezi emabhulashini ayatholakala esizeni esemthethweni noma kwezinye izitolo inthanethi organic izimonyo, amaphilisi, njll
Oh, labo inkohliso
manga zesiFundo izwe lobuhle kuyinto ongashi. Ngokwemvelo, ukuthenga zinindwa izinto noma cha, isinqumo sokuthi ngamunye yena. Amawebhusayithi amaningi Chinese noma ezitolo okudayisa, "sasendlini" ibhulashi amasethi ithengiswe "like" Ekotuls. ' " Kukhona ngisho Case samanje ekhishelwe emabhulashini for ukwakheka Nokho, okuyinto, sifana isikhwama. Ukupha uhlobo! Zonke Kungaba kuhle uma lezi predmenty babeyithanda kakhulu, izinga ezingabazekayo kakhulu. ibhulashi Original le nkampani - hhayi imikhiqizo sokunethezeka, abasakwazi okungabizi. Ziyakwazi kancane ngaphezulu kuyabiza kuka copycats yabo Chinese, kodwa isikhathi eside.